Siouxland Public Media News: Somali | KWIT
Hosted by Halima Osman
News in Somali for the Siouxland region. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.
Somali News 09.17.21
By Halima Osman • Sep 18, 2021
Tirada dadka reer Iow ee isbitaalka u jiifa COVID-19 ayaa weli ka badan 500, hal khabiirna wuxuu leeyahay waxay dhibaysaa nidaamka isbitaalka gobolka. Isbitaalada iyo Rugaha Caafimaadka ee Jaamacadda Iowa ayaa sheegaya in ICU -ga isbitaalka uu hadda la tacaalayo qulqulka bukaannada COVID. Taasi waa dusha sare ee wax ka qabashada tiro ka badan celceliska bukaannada aan COVID ahayn.
UIHC waxay codsiyo beddelaad ka helaysaa isbitaallada gobolka oo dhan - iyo waddankaba.
Somali News 09.16.21
By Halima Osman • Sep 17, 2021
Qorshaha koowaad wuxuu ballaarin doonaa Degmada afaraad ee Kongareeska oo dabooli doonta Siouxland laga bilaabo 39 ilaa 44 degmo. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Ames waxaa loo wareejin doonaa degmo kale.
(Wakaaladda Adeegyada Sharci -dejinta ee aan xisbiyada ahayn waxay mas'uul ka tahay inay raacdo tilmaamaha faahfaahsan si loo hubiyo isu -dheelitirka dadweynaha ee degmooyinka shirweynaha Iowa iyo ka -hortagga saamaynta siyaasadeed ee qabyo -qoraalka bilowga ah ee isbeddelada.
Dhageysiga dadweynaha waxaa loo qabtay Isniinta, Talaadada iyo Arbacada.)
Somali News 09.15.21
By Halima Osman • Sep 16, 2021
Degmada Dugsiga Bulshada ee Sioux ma soo celin doonto waajibaadka maaskaro.
Ma jirin taageero ku filan oo arrinta cod loogu qaadi lahaa.
Qaar ka mid ah guddiga ayaa walaac ka muujiyay ixtiraam la'aanta ay muujiyeen intii uu socday kulanka muwaadiniinta diidan waajibaadka maaskaro.
Lambarradii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxay muujinayaan kororka caabuqa ee Degmada Woodbury. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku daray in ka badan 400 xaaladood hal toddobaad gudahood, taasoo kor u kacday 100 xaaladood.
Somali News 09.14.21
By Halima Osman • Sep 15, 2021
Kulan deg -deg ah ayaa dhacaya Arbacada si Guddiga Dugsiga Beesha Sioux uu go'aan uga gaaro in la meel mariyo waajibaadka maaskaro. Kulanka waxaa lagu baahin doonaa internetka 3 -da galabnimo.
Madaxweyne ku xigeenka guddiga Monique Scarlett ayaa soo jeediyay mooshinka codaynta, isagoo sheegay in waajibaadka maaskaro uu gacan ka geysan karo joojinta faafitaanka kala duwanaanshaha Delta ee coronavirus.
Somali News 09.13.21
By Halima Osman • Sep 14, 2021
Garsoore federaal ah ayaa hor istaagay dhaqan gelinta mamnuucidda Iowa ee waajibaadka maaskaro ee dugsiga soo saaray.
Xukunka ayaa ka dhigan in degmooyinku ay dooran karaan inay u baahdaan maaskaro caalami ah oo dhexmarta ardayda iyo macallimiinta sida ay ku talisay CDC, laakiin amarku waa mid ku -meel -gaar ah oo sugaya natiijada dacwadda.
Guddoomiyaha Iowa Kim Reynolds ayaa qorsheynaya inuu racfaan ka qaato go'aanka.
By Halima Osman • Sep 11, 2021
By Halima Osman • Sep 10, 2021
Saraakiisha Waaxda Maaliyadda Mareykanka ayaa sheegaya maanta inay khadka internetka kula kulmi doonaan dadka deggan Degmada Woodbury Isniintii, si ay ugala hadlaan sida tilmaamaha maaliyadeed ee federaalku u saameyn karto soo jeedinta adeegsiga lacagaha coronavirus -ka federaalka.
Ogeysiiskaasi wuxuu ka yimid war ka soo baxay kooxda aan macaash doonka ahayn ee United Today Stronger Tomorrow. Xubnaha kooxda ayaa ka walaacsan adeegsiga lacagta Qorshaha Soo -kabashada Mareykanka si ay ula tacaalaan kharashaadka sii kordhaya ee xarunta fulinta sharciga.
Somali News 08.24.21
By Halima Osman • Aug 25, 2021
Faafitaanka COVID-19 wuxuu ku sii socdaa Iowa.
Waxaa jiray ku dhawaad ​​2,200 kiis Sabtidii.
Degmada leh tallaalka ugu hooseeya, Degmada Davis, oo ku taal koonfurta-dhexe ee Iowa, ayaa leh tirada ugu badan ee qofkiiba ee caabuqyada cusub toddobaadkii la soo dhaafay.
31% ayaa lagu tallaaley Degmada Davis. Degmada Sioux - 35%. Degmada Woodbury - 45%.
Celceliska toddobada maalmood ee Iowa ee isbitaallada ee COVID-19 ayaa sidoo kale kor u kacaya oo taagan 491, oo ah 54% koror labadii toddobaad ee la soo dhaafay, sida laga soo xigtay xogta New York Times.
Somali News 08.19.21
By Halima Osman • Aug 20, 2021
Dimuqraadiyiinta Iowa waxay ugu baaqayaan Guddoomiyaha Jamhuuriga Kim Reynolds inuu u oggolaado iskuullada inay raacaan tilmaamaha CDC oo ay uga baahan yihiin ardayda iyo macallimiinta inay xirtaan maaskaro. Reynolds wuxuu saxiixay sharci cusub bishii May kaas oo mamnuucaya waajibaadka maaskaro ee dugsiyada.
Hoggaamiyaha Dadka laga tirada badan yahay ee aqalka Jennifer Konfrst oo ka tirsan Windsor Heights ayaa ka digaya degmooyinka ka hor imanaya sharcigaas.
Somali News 07.28.21
By Halima Osman • Jul 29, 2021
Saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa muujiyey walaaca sii kordhaya ee ku saabsan kororka kiisaska coronavirus iyo isbitaallada la dhigo Nebraska, ugu horreyntii dadka deggan ee aan tallaalin.
Saraakiisha ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin kororka tartiib-tartiib-tartiib ah ee dadka qaba cudurka oo aakhirka isbitaallada la dhigo, iyagoo cadaadis saaraya qeybaha daaweynta COVID-19.
Somali News 07.27.21
By Halima Osman • Jul 28, 2021
Dhamaan Siouxland waxay kujireen La-talin Heat Talaadadii. Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in kuleylka iyo huurka ay is biirsanayaan si loo abuuro xaalado khatar ah illaa Arbacada. Saraakiisha ayaa sheegaya in taxaddar la muujiyo haddii banaanka la joogo, qoyaan ahaada, oo la ilaaliyo calaamadaha cudurada kuleylka la xiriira. Sidoo kale, ha iloobin xayawaanka rabaayadda ah.
Heerkulka ayaa sii kici kara xitaa in ka badan Arbacada, iyada oo qiimaha qiyaasta kuleylka uu gaarsiisan yahay 107 darajo. Ilaalin Heat xad-dhaaf ah ayaa horay loo soo saaray Arbacada.
Somali News 07.26.21
By Halima Osman • Jul 27, 2021
Dimuqraadiyiinta Gobolka waxay ugu baaqayaan Gov. Kim Reynolds inuu buuxiyo kuraasta ka banaan Golaha Caafimaadka Bulshada ee Gobolka Iowa. Gudiga labada dhinac wuxuu kormeeraa siyaasada waaxda caafimaadka ee gobolka wuxuuna lataliyaa gudoomiyaha arrimaha caafimaadka bulshada, oo ay kujirto CUDURKA-19 faafa.
Laakiin way awoodi wayday inay la kulanto horaantii bishan maadaama toddobo ka mid ah kow iyo tobanka kursi ay banaan yihiin.
Somali News 07.22.21
By Halima Osman • Jul 23, 2021
Haweeneydii hore ee hal mar Congress-ka ahayd Abby Finkenauer (fink-in-now-er) ayaa ku dhawaaqday inay u tartameyso aqalka Senate-ka Mareykanka. Maanta waxay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee la tartama Senator Senator Chuck Grassley, oo ka mid ah mudanayaasha ugu muddada dheer taariikhda soo qabtay taariikhda Mareykanka.
Sidoo kale, Dave Muhlbauer oo ah beeraley tartan dimuqraadi ah (mall-bow (sida hadda) -er) oo ka socda Manning. Senator-ka Gobolka Jim Carlin ee Sioux City sidoo kale wuxuu caddeeyay inuu u tartamayo doorashada hordhaca ah ee xisbiga Jamhuuriga.
Somali News 07.19.21
By Halima Osman • Jul 20, 2021
Iskuulada Nebraska waxay ka helayaan talobixin is khilaafsan saraakiisha caafimaadka ee gobolka iyo federaalka oo ku saabsan in ardayda ay karantiil yeelanayaan ka dib markay la xiriiraan qof tijaabiya cudurka COVID-19.
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee gobolka ayaa u sheegaysa dugsiyada in ardayda xiriir la yeelatay qof qaba cudurka aan loo baahnayn inay karantiil iska saaraan illaa iyo inta aysan lahayn wax calaamado ah.
Laakiin CDC-da ayaa sheegaysa in ardayda aan la tallaalin ee xiriir dhow la leh qof qaba cudurka ay tahay inay weli karantiil ku jiraan.
Somali News 07.16.21
By Halima Osman • Jul 17, 2021
Heerka shaqo la’aanta ee Iowa ayaa waxyar kor ugu kacay 4% bishii Juun iyada oo dad badan oo degan ay bilaabeen inay shaqo raadsadaan. Iowa Workforce Development ayaa soo warisay jimcihii in heerka shaqo la'aanta uu ka kordhay 3.9% bishii May.
Heerka shaqo la'aanta ee Nebraska ayaa ku dhowaad aan isbeddelin bishii la soo dhaafay halka heerarka qaar ka mid ah magaalooyinkeeda ugu waaweyn ay waxoogaa kor u kaceen. Waaxda Shaqada ee Nebraska waxay leedahay gobolka oo dhan, heerka shaqo la'aanta xilliyeed ee la hagaajiyay ee 2.5% bishii Juun, marka la barbar dhigo 2.6% bishii Maajo.
Somali News 07.15.21
By Halima Osman • Jul 16, 2021
Saraakiisha ayaa sheegaya in aan wax dhimasho ah ama dhaawac ah laga soo sheegin duufaannada kala goosha bartamaha iyo bariga Iowa, laakiin in badan oo ka mid ah waxay heleen dhismayaal burbursan, geedo googo’ay iyo gawaari rogmaday oo ku socda waddada duufaanta. Adeegga Cimilada ee Qaranka ayaa sheegaya in duufaanno soo taabtay shalay galab iyo habeen u badnaa dhulka miyiga ah, ee aan la degganeyn.
Somali News 07.14.21
By Halima Osman • Jul 15, 2021
Xaakim ayaa ogolaaday in dib loo dhigo xukunka ninka lagu helay dilka dilkii Mollie Tibbetts oo ahaa arday wax ka barta Jaamacada Iowa kadib markii qareenadiisa ay sheegeen inay u baahan yihiin waqti si ay u baaraan macluumaad cusub oo dad kale ku lug leh
Cristhian Bahena Rivera (Christian Buh-hay-nuh Reh-vair-uh) ayaa lagu waday in lagu xukumo xabsi daa’in iyada oo aan suurta gal ahayn in lagu sii daayo khamiista.
Bahena Rivera waxaa lagu xukumay dil darajo koowaad ah bishii May ee dilkii Tibbetts '2018.
Somali News 07.08.21
By Halima Osman • Jul 9, 2021
Dhakhtar sare oo ka tirsan Jaamacadda Nebraska Medical Center ayaa ka digay kor u kaca cusub ee kiisaska COVID-19 ee dadka waaweyn.
Gobolka ayaa diiwaan galiyay in kabadan 450 kiis usbuucii la soo dhaafay, koror 55% ka badan kii usbuucii kahoreeyay.
Dr. James Lawler wuxuu leeyahay kordhintaan ma ahan wax lala yaabo marka loo fiiriyo kala duwanaanshaha kaladuwanaanshaha dadka iyo gobolka iyo dadka aan wali helin talaal.
Wuxuu aaminsan yahay in xagaaga uu "foolxumo" ugu noqon karo dadka da'doodu tahay 20 ilaa 50 sano.
Somali News 07.07.21
By Halima Osman • Jul 8, 2021
Tirada Iowans isbitaal la COVID-19 waxaa kor u sax, in kastoo tirada cayriin dhow waxa ay ahaayeen bilowgii sanadka faafa ee la soo dhaafay waa. koror in isbitaal la yimaado sida saraakiisha caafimaadka dadweynaha ka digay in kala duwanaansho Delta ka badan laysku qaadsiyo ee coronavirus waxa uu ku faafayaa Iowa.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa sheegtay in 85 qof la jiifiyay isbitaalka Iowa cudurka maanta, ka dib markii ay si kooban ugu dhacday 50 labo todobaad ka hor.
Somali News 07.06.21
By Halima Osman • Jul 7, 2021
Saraakiisha gobolka ayaa sii daayay warbixinno kormeer ah oo qancin ah oo shan sano ah oo loogu talagalay safarka Adventureland oo ahaa meeshii uu ka dhacay shil dilaa ah dhamaadka usbuucaan Ragga Webiga Raging ayaa la baaray Jimcihii la soo dhaafay. Kormeeruhu ma helin "wax xad gudub nambar waqtigan" sida ku xusan ogeysiiska ku yaal qeybta hoose ee warbixinta kormeerka. Aabaha dhalay wiilka 11 jirka ah ee shilka ku dhintay kadib wuxuu leeyahay suumanka suunka ayaa ku xayiran qoyska.
Somali News 07.02.21
By Halima Osman • Jul 3, 2021
Xitaa iyadoo ay jiraan roobab culus, roob dhagaxyaale, iyo daadad ka socda qaybo ka mid ah gobolka Iowa, bishii Juun waxaa lagu duubay qoyaan ka hooseeya heerka caadiga ah ee gobolka oo dhan.
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in qeybtii hore ee bisha ay ku jirtay tobanka ugu sarreeya ee diirimaadka.
Qeybtii labaad ee Juun waxay keeneen duufaanno ilaa 11 inji koonfur-bari Iowa. Beeraleyda Gobolka Plymouth waxay la kulmeen roob dhagaxyaa leh.
In kasta oo ay taasi jirto, gobolka guud ahaan wali waxaa ka maqnaa roobab, oo ay ku jiraan waqooyi-galbeed Iowa.
Somali News 07.01.21
By Halima Osman • Jul 2, 2021
Sharciga cusub ee Iowa ee qoryaha ogolaanshaha ka yar ayaa dhaqan galaya laga bilaabo maanta. Iowans mar dambe uma baahna rukhsad ay ku qaataan ama ku iibsadaan qori.
Weli waa inay helaan baaritaanka taariikhda markay wax ka iibsanayaan iibiye hubaysan oo federaal ah oo shati haysta. Si kastaba ha noqotee, looma baahna baaritaanka asalka ah si loogu iibsado qori yar iyada oo loo marayo iibinta gaarka loo leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waa dambi weyn inuu qof ka iibiyo qoriga qof laga mamnuucay inuu haysto mid.
Somali News 06.30.21
By Halima Osman • Jul 1, 2021
Nin u dhashay magaalada Sioux City ayaa lagu xukumay 55 sano oo xabsi ah dil toogasho ah oo sanadka cusub ka dhacay magaalada Morningside.
20-jir Christopher Morales ayaa qirtay qirasho dambi ah Dil Darajada 2aad ee dhimasha 18 jir Mia Kritis (Kree-tis).
Walaalkiis iyo qof kale ayaa sidoo kale lagu eedeeyay dil kiiska.
Gobolka Iowa wuxuu ka hor istaagi karaa waalidnimada la qorsheeyay inay hesho lacag loogu talagalay barnaamijyada waxbarashada galmada iyadoo la raacayo xukunkii maxkamada sare ee Iowa ee maanta la soo saaray.
By Halima Osman • Jun 30, 2021
By Halima Osman • Jun 29, 2021
Gudoomiyaha Pete Ricketts ayaa soo afjaray Xaalada Degdega ah ee COVID-19 ee Nebraska.
Waxay bilaabatay 13-kii Maarso ee sanadkii hore. Amarada badankood waxay dhacayaan dhamaadka bisha, dhowr maalmood gudahood.
Ricketts ayaa sheegay in kaliya 27 ay kujiraan isbitaalada gobolka, ayna tahay waqtigii si caadi ah loogu soo laaban lahaa.
Wuxuu ku booriyay dadka inay is talaalaan si loo yareeyo faafitaanka cudurka.
Somali News 06.24.21
By Halima Osman • Jun 25, 2021
Maanta Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay in saraakiisha ilaalada gobolka Iowa loo daad gureyn doono Xuduudaha Koofureed ee Mareykanka si ay uga caawiyaan fulinta sharciga iyo dadaallada amniga xuduudaha. Gudoomiyaha ayaa kajawaabaya codsi uga yimid Gudoomiyaha Gobolka Texas Greg Abbott iyo Gudoomiyaha Gobolka Arizona Doug Ducey oo ku hoos jira Compact Assistance Assistance Compact. Reynolds wuxuu sheegay kororka daroogada, ka ganacsiga dadka, iyo dambiyada rabshadaha ah inay noqdeen kuwa aan la sii wadi karin.
Somali News 06.23.21
By Halima Osman • Jun 24, 2021
Nin 20 jir ah oo ka soo jeeda magaalada Sioux City ayaa qirtay inuu toogasho ku dilay haweeney xaflad ka socotay sanadka cusub. Christopher Morales ayaa qirtay dambiga dil labaad oo ah geerida 18 jir Mia Kritis (kree-tis). Waa ladilay sadex qof oo kalena waa la dhaawacay markii Morales iyo kuwa kale ay rasaas ku rideen guri. Morales walaalkiis oo 18 jir ah ayaa lagu eedeeyay dil darajo heerka koowaad ah. 18 sano jir kale ayaa qirtay dambiga dil labaad.
Somali News 06.22.21
By Halima Osman • Jun 23, 2021
Tamarta dabaysha ayaa diirada saarey dhageysiga dadweynaha kahor Horjoogayaasha Degmada Woodbury galabnimadii Talaadada. Waxay doonayeen in talo lagu soo kordhiyo sharci ku xeeran tamarta dabaysha. Dhageysiyada sidoo kale waxaa loo qorsheeyay labada Talaado ee soo socota. Warshadaha dabaysha waxaa ka shaqeeya qiyaastii 10,000 oo qof oo ku nool Iowa waxayna bixiyaan $ 58 milyan oo canshuurta gobolka iyo deegaanka ah.